Barcelona oo guul dirqi ah ka heshay kooxda Getafe oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou… +SAWIRRO – Gool FM
Barcelona oo guul dirqi ah ka heshay kooxda Getafe oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou… +SAWIRRO
Dajiye February 15, 2020
(Barcelona) 15 Feb 2020. Barcelona ayaa guul dirqi ah ka heshay kooxda Getafe oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, kulan ka tisanaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Barcelona.
Daqiiqadii 33-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Lionel Messi.
Daqiiqadii 39-aad kooxda Barcelona ayaa dhalisay gool labaad, waxaana 2-0 ka dhigay Sergi Roberto iyadoo uu goolkan ka caawiyay Junior Firpo.
Daqiiqadii 66-aad kooxda Getafe ayaa la timid gool, waxana dheesha 2-1 ka dhigay Angel Rodriguez, iyadoo uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Jaime Mata.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 2-1 ay Barcelona kaga adkaatay kooxda Getafe oo marti ugu aheyd garoonka Camp Nou.
Shaxda rasmiga ah kulanka Norwich City iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Celta Vigo… (Miyuu qeyb ka yahay Hazard?)